Sida loo Helo Meelaha Baakadaha bidix ee Talyaaniga | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sida loo Helo Meelaha Baakadaha bidix ee Talyaaniga
Ciao! Waad qorsheynta safarka ee Meyeydaan in Italy! Waa ku dhashay ee hormariyo iyo magaalo ballamo in elate oo aad loo Waxyoodo ahayn shuqullada aawadood ay of farshaxanka, naqshadaha, iyo jacaylkeeda cuntada. Italy waa guriga dhabta ah ee hudheellada. Suxuunta aan u adeegeen sidii cuntada, iyagu waa curiyay. Inta aad sahaminta magaalada dabayl cirwareen ah ee wax yaab leh, halkaas oo aad ka heli karto goobaha boorsooyinka bidix ee Italy?
Socodkeeda jidadka cobbled, ku dhex qulqulaya jawiga adag ee jacaylka, waxaa baaldi-liiska caga dhigaysa. Waxa kaliya ee in burburisay kartaa hindiga waxaa isagoo u raraan boorsooyinkaaga kula maxaa yeelay, oo raba in la culaysin meel walba aad u tagto? Shandadayaasha bilaashka ah oo faraxsan ayaa ah habka loogu safro dalka Talyaaniga oo sidan loo sameeyo waxaad adeegsan kartaa tiro ka mid ah boorsooyinka bidix ee Talyaaniga ah.
Fursad aamin ah oo fudud oo loogu talagalay kaydinta shandadaha, on Layover a, waa garoonka diyaaradaha ama haddii aad qabtid maalintii xor ah oo aan hotel a. Maskaxda ku hay in garoomada diyaaradaha waaweyn ee xarunta this waa fursad fudud, laakiin garoomada diyaaradaha yar yar waxaa laga yaabaa in duwantahay sidaas sameeyo cilmi-baaris ka hor inta aadan garoonka diyaaradaha ee aad dooratay. Waxaa ugufiican inaad horay u hubiso adigoo booqanaya websaydhka garoonka diyaaradaha si aad u ogaatid meelaha boorsooyinka bidix ee Talyaaniga ah.
Tikidhada Bari ilaa Fasano
Taranto tikidhada Fasano
Milan illaa tikidhada Florence
Venice ilaa tikidhada Milan
Garoonka Milan Malpensa ay boorsooyinka bidix waxa uu ku yaalaa on heerka Yimid ee Terminal 1. Waxay furan maalin kasta waxaa laga 6 ahay in 10 pm. Qiimaha kala duwan, waayo, wax yar, aad bixiso lahaa ku saabsan € 3.50, shay weyn oo ku dhawaad ​​€ 4 iyo midkiiba 24 saacadood.
Airport Rome Fiumicino ay boorsooyinka bidix waa dabaqa dhulka ee Terminal ah 3. Waxay furan maalin kasta waxaa laga 6:30 ahay in 11:30 pm iyo ku kici doona oo ku saabsan € 6 per item muddo 24-saac ah.
Venice Marco Polo Airport ee xafiiska boorsooyinka bidix waa dabaqa dhulka, gudaha terminal garoonka at helaan 1. Maalin kasta way furan yihiin laga bilaabo 5 waxaan ahay 10 pm, laakiin jeer kala duwanaan karaan xilliga qaboobaha.
Milan ilaa tikidhada Naples
Florence illaa tikidhada Naples
Venice ilaa tikidhada Naples
Pisa illaa tikidhada Naples
Xarumo tareen oo aad ku kaydinkarto shandada bidix
Rome waxay leedahay saddex saldhig weyn ee tareenka, Ostiense, Roma Termini, iyo Roma Tiburtina. Xaqiiqdii waad lunteen inaad dooratid markay tahay bixiyeyaasha kaydinta boorsooyinka bidix ee talyaaniga ah.
Haddii aad tahay dhex marta tareenka loogu talagalay maalinta, then the lockers are the way to go. All of these stations have luggage checking services, qaar ka mid ah is-adeeg.
Waxaad filan kartaa in lacag u dhaxaysa € 10 oo € 15 maalin kasta, celcelis ahaan. Sida a note kooxda yar, tareenada sidoo kale waxay ku fiican yihiin kaydinta cuntada iyo biyaha maalintii, kiraysanayso baaskiilada iyo lacag ay barbaro galeen.
Xarumaha magaalada Milan
Tareenadu waa habka ugu haboon ee lagu maro Yurub iyo Milan, waxaa jira afar saldhig tareen oo waaweyn, Milano Lambrate, Milan Rogoredo, Milano Centrale iyo Milan Porta Garibaldi.
Sida aynu hore u sheegay, waxa jira yaraan ma bixiyeyaasha adeegga sababtoo ah waa baahi weyn marka aad ku biiro.
Waqtiga kaydinta ugu badan iyo saacadaha boorsooyinka bidix ee Talyaanigu way kala duwan yihiin saldhigyada kala duwan oo waxaad bixin doontaa iskucelcelis € 10 illaa € 15 maalintii. Waxaa sidoo kale laga yaabaa in miisaanka xayiraad, Xaaladaha qaarkood markaa hubi inaad mar labaad hubiso.
Saldhigyada ku yaal Venice
Venezia Santa Lucia waa xarunta dhexe ee tareenka ee Venice waxayna leedahay qorsheyaal badan oo loogu talagalay goobaha boorsooyinka bidix ee Talyaaniga.. The la mid ah sida Milan iyo Rome, Waxay fidisaa Venice si macquul ah oo qiimahoodu macquul u yahay boorsada bidix.
Qaar ka mid ah waxay yeelan doonaan miisaan kala duwan oo kala duwan markii ay suuragal tahay. dukaamo labiska Is-adeegga waxaa haboon kaalinta oo dhan Venice.
Milan ilaa tikidhada Genoa
Rome ilaa tikidhada Genoa
Florence illaa tigidhada Genoa
Venice ilaa tigidhada Genoa
Goobaha shandada Bidix Ku wareegsan Magaalada Hoteelada
dekedda koowaad ee call Your noqon doonaa hotel aad, hostel, ama Airbnb meesha boorsada bidix lagu hayo. Ka dib markii aad ka hubisay baxay, ha ka baqin inaad weydiiso sababta oo ah shirkadaha badan hayn doonaa boorsooyinka bidix for free. Its sida caadiga ah oo kaliya xaddi gaar ah oo wakhti hubi inaad u hesho kuwa faahfaahin habboon.
Weyddii miiska hore dalabyada ku saabsan ammaan xirid iyo lookarrada. Leave tip a yar haddii aad siiso boorsooyinka in iridjoogihii a.
Shandada Bidix Gaar ah Adeegyada
Stow Dambiisha Your
Tani waa doorasho caansan Yurub iyo sumcad hugaaminaya. Waxaan diiradda saaray Italy waxayna leeyihiin laamaha ee Rome, Milan, Florence, Naples, Pisa, Catania, iyo Bari, in la hubiyo si ay u daboosho dhammaan Italy iyo magaalooyinka ay ka socdeen. Is-adeegga waa doorasho weyn.
Khadadka Ka fogow iyo faa'iido qaaddaa surveillance 24-saac oo ugu muhiimsan, bac la caymis ilaa € 300.
Xafiisyada Kaydinta boorsooyinka
Tani waa fursad gaar ah boorsooyinka bidix in Venice a.
Waxaad ka heli doontaa hoolka imaatinka ee garoonka diyaaradaha ee Venice Marco Polo, Venice Santa Lucia Railway Station ah, Piazzale Roma, iyo Terminalka Dalxiiska ee Venice. Waxa uu si xirfad leh loo geeyaa meelaha gaadiidka. Tani waxay doorashada ugu fiican ee in ay hoos u qabso oo tag.
Marka aad u safarto Italy iyo aad u baahan tahay meelo boorsooyinka bidix, Sidaa darteed waa muhiim in horay loo sii hubiyo sida ku xusan aad faahfaahin. jeer Check, hubi xaddidaadaha miisaanka, oo iska hubi kharashka, in loo diyaar garoobo! Tan ugu muhiimsan, raaxaysan Italy, boorsooyinka lacag la'aan ah.
Ku dheji Save A tareenka si aad u hesho xulashooyinka tigidhada ugu fiican ee laga heli karo qiimaha ugu wanaagsan ee suuragalka ah!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Bidixyada boorsooyinka bidix ee Talyaaniga iyo Sida loo helo” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-italy/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel eurotrip leftluggage longtrainjourneys shandadaha tareen safarka travelitaly